Shiinaha saliid saafi ah oo dabiici ah oo laga soosaaray saliida lafdhabarta u ah warshadda iyo alaab-qeybiyeyaasha tirada badan | Aragtida
Soosaar saafi ah iyo Dabiici ah saliida saliidda lafdhabarta u ah tiro badan
Saliida lagama maarmaanka ah waxaa loo isticmaali karaa fooxa, duugista iyo alaabada daaweynta jirka. Waxaa jira laba nooc: mid waa saliid lagama maarmaan; tan kale waa 100% saliid muhiim ah oo saafi ah. Waxay ka dhigi kartaa dadka inay dareemaan dabacsanaan jir iyo maskax ahaanba, sidaas darteed waxay dadka ka ilaalin kartaa cudurada iyo gabowga.
Magaca Kiimikada: Saliida Lavender
Saliida loo yaqaan 'Lavender oil' waxaa laga soo qaadaa inta badan ubaxa geedka lavender-ka, ugu horreyn iyada oo loo marayo kala-baxa uumiga. Ubaxyada lavender waa udgoon dabiiciyan waxaana loo isticmaali jiray sameynta potpourri qarniyo badan. Dhaqan ahaan, saliidda lagama maarmaanka ah ee loo yaqaan 'lavender oil' ayaa sidoo kale loo isticmaali jiray samaynta cadarka. Saliida ayaa faa'iido badan u leh udugga iyo udiyaar garowga udgoon badan iyo isku darka.Lavender saliiddu waxay si fiican ugu dhex jirtaa saliidaha kale ee muhiimka ah oo ay ka mid yihiin geedaha kedar, geedaha, xikmadda dhirta, geranium, iyo nutmeg Maanta, lavender saliid lagama maarmaan waxaa badanaa loo isticmaalaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan saliid udugga, jel, faleebo, looshin, iyo saabuun.
1. Cayayaanka Cayaya
Udgoonka saliida lama huraanka ah ee lavender-ka ayaa awood u leh noocyo badan oo cayayaan ah sida kaneecada, bartamaha, iyo aboor. Ku mari qaar ka mid ah saliida lavender-ka maqaarka soo gaadha marka aad banaanka joogto si aad uga hortagto qaniinyadan cuncunka leh. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad dhacdo inaad qaniinto mid ka mid ah cayayaankaas, lavender saliida lagama maarmaanka ah waxay leedahay sifooyin anti-bararka oo yareyn doona xanaaqa iyo xanuunka la xiriira qaniinyada cayayaanka.
2. Hurinta Hurdada
Lavender saliida lagama maarmaanka ah ayaa keenta hurdo taas oo ka dhigtay talo guud oo loogu talagalay daaweynta kale ee hurdo la'aanta. Daraasado isdaba joog ah oo ku saabsan bukaanada waayeelka ah ayaa muujiyay kororka joogtada ah ee hurdadooda marka dawadooda hurdo ee caadiga ah lagu bedelay qaar saliida lavender ah oo barkimadooda la dhigayo. Waxay ku leedahay saameyn raaxo leh dadka taas oo badanaaba beddeli karta daawada casriga ah ee arrimaha hurdada.
3. Waxay ilaalisaa Nidaamka neerfayaasha caafimaadka qaba
Lavender saliida lagama maarmaanka ah waxay leedahay caraf dejinaysa taas oo ka dhigaysa mid aad u fiican oo loogu talagalay dareemayaasha iyo arrimaha walaaca. Sidaa darteed, waxay sidoo kale caawin kartaa daaweynta xanuunka dhanjafka, madax-xanuun, niyad-jabka, xiisadda neerfaha iyo walwalka shucuurta. Udgoonka cusboonaysiinta ayaa meesha ka saaraya daalka neerfaha iyo degganaanta iyadoo sidoo kale kordhinaysa dhaqdhaqaaqa maskaxda. Waxay leedahay saameyn sifiican loo baaray oo ku saabsan nidaamka neerfaha ee madax-bannaanida, taas oo ah sababta badanaa loogu isticmaalo daaweyn la'aanta hurdo la'aanta iyo sidoo kale hab lagu xakameeyo kala duwanaanta heerka wadnaha. Hal daraasad ayaa muujisay in dadka imtixaanada qaadaya ay muujiyeen hoos u dhac weyn oo ku yimid culeyska maskaxda iyo walwalka, iyo sidoo kale kordhinta shaqada garashada marka ay neefsadaan saliida lavender iyo saliida rosemary ka hor inta aysan imtixaanka qaadin.
Ku xafid Bakhaarka si fiican u xidhan meel qabow oo qalalan, oo laga soocay qorraxda.
Laba sano oo ay kujirto xaalad keyd wanaagsan oo keydinta qorraxda toos looga ilaaliyo
1kg / dhalo, 25kg / durbaan, 50kg / durbaan, 180kg / durbaan
aan midab lahayn oo saliida isbedbeddelka huruud ah leh, Iyadoo leh
dabeecad udgoon udgoon cusub
si fudud u milmi kara in ka badan 75% ethanol
linalyl acetate45% Linalool 12% pinene, iwm
* Intaa waxaa dheer ：
Shirkaddu waxay baari kartaa oo ay horumarin kartaa faahfaahinta cusub iyadoo loo eegayo baahida gaarka ah ee macaamiisheena．
Hore: Shiinaha GMP warshad waxay bixisaa 100% Saliid ah Kaafuur saliid lagama maarmaan ah
Xiga: 100% daahir ah iyo dabiicada 50% 65% 85% saliid geed sicir fiican 8002-09-3
Qiimo wanaagsan Carvacrol dareeraha dareeraha 499-75-2
Nadaafad sare 98% min Caleen Caleen caleen 928-96-1 ci ...
100% nadiif ah oo dabiici ah Saliida Qorfe CAS 8007-80-5
100% budada kaafuur daahir ah oo dabiici ah 76-22-2
100% nadiif ah iyo dabeecadda 50% 65% 85% saliid geed tag ...
100% dabiici ah Beta pinene dabiici ah oo badan CAS 127-91-3